Wararka Maanta: Sabti, Sept 29, 2012-Xarkada Al-shabaab oo sheegtay in Maamulkeedii ay kala baxday Kismaayo, Laakiin ciidamadeedu ay dagaalami doonaan
Al-shabaab ayaa boggeeda Twitter-ka ku sheegtay in shan sano oo Kismaayo ay maamulayeen kaddib ay isaga baxeen magaaladaas, balse waxay hadalkooda ku dareen in ciidamada Kenya iyo kuwa la socda ay eedi doonaan duullaanka ay kusoo qaadeen magaalada dekedda leh ee Kismaayo.
"Shan sano kaddib xalay, Al-shabaab waxay xirtay xafiisyadii ay ku lahayd Kismaayo," ayaa lagu yiri war kooban oo lagu qoray bogga Twitter-ka ee Xarakada Al-shabaab, iyagoo ka bixitaankooda ku sheegay xeelad dagaal, balse ma aysan sheegin halka ay ciidamadeedu aadeen.
Bog Internet ah oo lagu baahiyo wararka Al-shabaab ayaa isaguna soo daabacay maanta in mas'uuliyiintii maamulka Al-shabaab ay isaga baxeen Kismaayo, balse ay weli ku sugan yihiin aagagga dagaalka ciidamada Al-shabaab oo doonaya inay ka difaacaan magaalada.
Xarumihii maamulka Al-shabaab ee Kismaayo ayaa saakay waxaa boobay dadweyne ku qamaamay, iyadoo dadku ay sheegeen inuusan jirin askari ka tirsan Al-shabaab oo ku sugan magaalada, inkastoo aan la ogeyn inay ku sugan yihiin goobaha la isku horfadhiyo iyo in kale.
Ciidamada huwanta ah ee isbahaysanaya ayaan iyaguna weli gelin magaalada, inkastoo shacabka magaalada ku haray ay ka baqdin qabaan in dhibaatooyin loo geysto marka ay ciidamada dowladdu galaan magaaladaas.
Magaalada Kismaayo oo ah xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxay ahayd magaaladii ugu weynayd ee ay Al-shabaab gacanta ku hayeen, iyadoo magaalada Jowhar ay noqonayso tan ugu weyn ee hadda ku hartay gacanta Al-shabaab.